Ukuqiniswa Kokuthuthukiswa Kwe-SameSite yakwa-Google Kungani Abashicileli Befuna Ukudlulela Ngaphesheya Kwamakhukhi Okuqondiwe Kwezethameli | Martech Zone
Ukwethulwa kwe Ukuthuthuka kwe-SameSite yakwaGoogle ku-Chrome 80 ngoLwesibili, uFebhu. 4 usayinela esinye isipikili ebhokisini lamakhukhi wesiphequluli esivela eceleni. Ukulandela izithende zeFirefox neSafari, esezivimbele amakhukhi wenkampani yangaphandle ngokuzenzakalela, kanye nesixwayiso esivele sikhona se-Chrome, ukuthuthuka kwe-SameSite kuqhubekisela phambili ukusetshenziswa kwamakhukhi wenkampani yangaphandle asebenze ngokuqondiswa kwezithameli.
Ushintsho ngokusobala luzoba nomthelela kubathengisi bezobuchwepheshe besikhangiso abathembele kakhulu kumakhukhi avela eceleni, kepha abashicileli abangalungisi amasethingi amasayithi abo ukuze athobele izimfanelo ezintsha nabo bazothinteka. Ngeke kuvimbele ukwenza imali kuphela ngezinsizakalo zohlelo lomuntu wesithathu, kepha ukwehluleka ukuthobela kuzophinda kuqede imizamo yokulandela indlela yokuziphatha kwabasebenzisi ebaluleke kakhulu ekunikezeni okuqukethwe okufanele, okwenziwe ngezifiso.
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kubashicileli abanamasayithi amaningi — inkampani efanayo ayilingani nesayithi efanayo. Lokho kusho ukuthi, ngokuvuselelwa okusha, amakhukhi asetshenziswe ezindaweni eziningi (isiza esiphambanweni) angathathwa njengeqembu lesithathu, ngakho-ke avinjelwe ngaphandle kwezilungiselelo ezifanele.
Shintsha ama-Drives Innovation
Ngenkathi abashicileli kuzodingeka ukuthi baqinisekise ukuthi amasayithi abo avuselelwa ngezimpawu ezifanele, lolu shintsho olulula olwenziwe yiGoogle kufanele futhi lwenze abashicileli bacabange kabili ngokuthembela kwabo ekuqondisweni komsebenzisi okususelwa kukhukhi. Kungani? Ngenxa yezizathu ezimbili:
Abathengi baya ngokuya bakhathazeke ngokuthi izinkampani ziyisebenzisa kanjani imininingwane yazo.
Kunendlela enembe kakhulu yokwakha igrafu yobunikazi.
Uma kukhulunywa ngobumfihlo bedatha, abashicileli babhekana nenkemba esika nhlangothi zombili. Idatha entsha ikhombisa lokho abathengi bafuna kakhulu okuqukethwe okwenzelwe wena izincomo ezingalethwa kuphela ngokuqoqa kanye nokuhlaziya idatha yokuziphatha kwabo. Noma kunjalo, abathengi banokungabaza okukhulu ngokwabelana ngaleyo datha. Kepha, njengoba abashicileli bazi, abakwazi ukuba nazo zombili izindlela. Mahhala okuqukethwe kuza ngezindleko, futhi kushoda nge-paywall, okuwukuphela kwendlela abathengi okufanele bakhokhe ngayo kunedatha yabo.
Bazimisele ukwenza njalo - U-82% uncamela ukubona okuqukethwe okuxhaswa yizikhangiso kunokukhokhela okubhaliselwe. Lokho kusho ukuthi umthwalo ukwabashicileli ukuthi baqaphele futhi bacabangele ukuthi bayiphatha kanjani idatha yomsebenzisi.
Enye Indlela Engcono: I-imeyili
Kepha, kuvela ukuthi kunendlela ephumelela kakhulu, ethembekile nenembile yokwakha igrafu yomsebenzisi kunokuthembela kumakhukhi: ikheli le-imeyili. Esikhundleni sokulahla amakhukhi, okunikeza abasebenzisi umbono wokuthi bayasindwa, ukulandelela abasebenzisi ababhalisiwe ngekheli labo le-imeyili, nokuhlanganisa lelo kheli kubunikazi obuthile, obaziwayo kuyindlela ethembeke kakhulu nethembekile yokubandakanya ababukeli. Nakhu ukuthi kungani:
I-imeyili ukhetha ukungena - Abasebenzisi babhalisele ukuthola incwajana yakho noma okunye ukuxhumana, bakunikeze imvume yokuthi ukwazi ukuxhumana nabo ngqo. Bayalawula futhi bangakhetha ukuphuma noma kunini.
I-imeyili inembe kakhudlwana - Amakhukhi angakunika kuphela umqondo omubi womuntu osuselwa ekuziphatheni — iminyaka elinganiselwe, indawo, usesho nokuziphatha kokuchofoza. Futhi, bangadakwa kalula uma abantu abangaphezu koyedwa basebenzisa isiphequluli. Isibonelo, uma wonke umndeni wabelana nge-laptop, umama, ubaba kanye nokuziphatha kwezingane konke kuhlangana kube yinto eyodwa, okuyinhlekelele yokukhomba. Kepha, ikheli le-imeyili liboshelwe ngqo kumuntu othile, futhi lisebenza kuwo wonke amadivayisi. Uma usebenzisa idivayisi engaphezu kweyodwa, noma uthola idivayisi entsha, i-imeyili isasebenza njengesikhombi esiphikelelayo. Lokho kuphikelela nekhono lokuxhumanisa ukusebenza kokuchofoza nokusesha kuphrofayili yomsebenzisi eyaziwayo kuvumela abashicileli ukuthi bakhe isithombe esicebile, esinembe kakhulu sokuthandwa ngumsebenzisi nezintshisakalo zakhe.
I-imeyili ithembekile - Uma umsebenzisi ebhalisa ngekheli lakhe le-imeyili, benza kanjalo bazi kahle ukuthi bazongezwa ohlwini lwakho. Sekudlulile — bakunikeze imvume besazi, ngokungafani namakhukhi azwakala sengathi uthwebula ukubuka kokuziphatha kwabo emahlombe abo. Futhi, ucwaningo lukhombisa ukuthi abasebenzisi banethuba elingu-2/3 lokuchofoza kokuqukethwe — ngisho nezikhangiso — ezivela kumshicileli abamethembayo. Ukuthuthela ekuqondisweni okususelwa ku-imeyili kungasiza abashicileli ukuthi balondoloze lokho kuthenjwa, okubaluleke kakhulu ezindabeni zamanga zanamuhla, imvelo enokungabaza okukhulu.
I-imeyili ivula umnyango wezinye iziteshi zomuntu ngamunye - Uma ususungule ubudlelwano obuqinile ngokwazi umsebenzisi futhi ukhombisa ukuthi uzoletha okuqukethwe okufanele futhi okwenziwe kwaba ngokwakho kuzintshisakalo zabo, kulula ukubabandakanya ngaphezulu kwesiteshi esisha, njengezaziso zokuphusha. Lapho abasebenzisi sebethembele kokuqukethwe kwakho, i-cadence nezincomo, bakulungela ngokwengeziwe ukwandisa ubudlelwane babo nawe, banikeze ngamathuba amasha okuzibandakanya nokwenza imali.
Ngenkathi ukuvuselela amasayithi ukuhambisana noshintsho lweSameSite kungaba buhlungu njengamanje, futhi kungahle kusike ngqo kwimali engenayo yabashicileli, iqiniso lehlisa ukuthembela kumakhukhi enkampani yangaphandle kuyinto enhle. Abagcini ngokuba yizinto ezingabaluleki uma kuziwa ekulandeleni okuthandwa ngumsebenzisi ngamunye, kepha abathengi bakhula ngokungabaza.
Ukushintshela manje ngendlela ethembekile, ethembekile efana ne-imeyili ukukhomba nokukhomba abasebenzisi kunikeza isisombululo esilungele ikusasa esibeka abashicileli ekulawuleni ubudlelwano babo nezethameli, kunokuthembela kakhulu kubantu besithathu.
Tags: chromiumukubhaliswa kwe-imeyilii-Google Chromeisayithi elifanayoukulandelela
Intengo Yemakethe Yesikhathi Sangempela Ingayithuthukisa Kanjani Ukusebenza Kwebhizinisi